Hel ah All-in-mid Video Converter u YouTube geliyaan iyo diinta
> Resource > Video > Hel ah All-in-mid Video Converter u YouTube geliyaan iyo diinta
Maqaalkani waxa uu inta badan soo kordhiyay ah Converter video weyn u YouTube. Waa caqli dhan-in-mid app, taas oo keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo aad videos YouTube maxalliga ah iyo kuwa online in ku dhawaad ​​kasta oo qaab ama qalab, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad loogu badalo ka mid ah deegaanka video files si YouTube ah oo ay taageerayaan qaab ay u geliyaan si ay u YouTube si fudud oo dhaqso. Next, ayaan u kala horreeyaan ku tusno sida loo badalo YouTube videos iyo geliyaan videos in YouTube la this video Converter weyn u YouTube. Labada geedi socodka labada waa mid aad u fudud.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo YouTube in qaabab ama qalab kale
Qeybta 2: Sida loo geliyaan wax video in YouTube si fudud oo dhaqso
Qaybta 1aad: Sida loo badalo YouTube videos in qaabab ama qalab kale
Talaabada 1: Import YouTube videos in video Converter this u YouTube
Waayo, maxalliga ah YouTube video files, kaliya aad u furo gal ah in ka kooban yahay files diirada ugu horeysay, ka dibna si toos ah kuwaa oo si Murayaad diinta this app ee. Waxa uu na tusay sida soo socota.
Wixii online YouTube videos, waxaad u baahan tahay in ay marka hore iyaga download si aad u computer. Si aad u samayn, tag oo kaliya in Download interface, riix batoonka + URL Add to paste video URL YouTube aad rabto, ka dibna riix OK si ay u bilaabaan soo degsado YouTube videos. Marka uu sameeyo, oo waxaad tagtaa maktabada ku dhameysatay, heli video shayga bar bixi, riix batoonka ku bar ah, ka dibna dooro "Beddelaan in" doorasho. Isla markiiba, ku file video bixi la soo bandhigi doonaa in ay leeg- tahay diinta this app ee, sida sawirka kor ku soo bandhigay. Hadda, waxaad sii wadi kartaa in aad raacdo tallaabooyinka hoose.
Talaabada 2: Dooro qaab wax soo saarka ah
Fur liiska qaab saarka this app ee garaacida image qaabka on Murayaad Qaabka Output ah. Waxaad arki doonaa dhammaan qaababka iyo qalabka audio & video ay si fiican halkan kala saaraa. Just si xor ah u doortaan waxa aad rabto in aad sida qaab wax soo saarka.
Tallaabo 3: Ku bilow diinta YouTube videos
Ugu dambeyntii, kaliya aad u riix badhanka badalo ee geeska hoose ee saxda ah ee suuqa si ay u bilaabaan diinta YouTube. Converter video Tani loogu YouTube ku dhameysan doona hawlaha oo dhan si dhakhso ah. Hit ikhtiyaarka Folder Open kadib markii diinta si aad u ogaato faylasha wax soo saarka ee isticmaalka. Wixii loo maqli karo ee qalabka, aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files wax soo saarka si ay u qalab aad via cable.
Qeybta 2: Sida loo geliyaan videos in YouTube
Ma aha in dhamaan video files si toos ah uploaded karaa in YouTube. Waxaa jira in badan oo ka liidato. Si kastaba ha ahaatee, video Converter this u Upload YouTube aad u saamaxaaya in ay si fudud oo dhaqso geliyaan kasta oo video files effortlessly.
Hawlgalka ayaa ku dhow waa isku mid sida mid ka mid ah ee kor ku xusan. Ka dib marka aad soo dhoofsadaan videos aad rabto in aad u geliyaan in YouTube, ka dibna in ay liiska qaabka wax soo saarka, dooran Qaabka> Web> YouTube sida qaab wax soo saarka ee talaabo 2. Marka diinta la sameeyo, waxaad gali kartaa faylasha wax soo saarka si ay u YouTube oo aan wax dhibaato.
Sida loo geliyaan MOV (Quicktime) si YouTube Effortlessly
Sida loo geliyaan AVI in YouTube Effortlessly
Sida loo geliyaan MP4 in YouTube Effortlessly
ID3 Editor - Nadiifi Qashin aad Music
Sida loo Play Videos on TV ka USB?
10 Facts Fun ubbada
Sida loo dar Lugood Movie metadata (AVI, MP4, MOV, MKV, iwm)
Sida loo Download Mevio Videos
Sidee aad kala bixi karto PBS Videos u Radidiyaha
Sida loo Beddelaan MOV (Quicktime) si VOB
Sida loo Edit MPEG Video Files